Yakanyanya Yakakwira Yekumanikidza Flanged Gate Valve Mugadziri uye Fekitori Kaibo
Z541W Yakakwira-yekumanikidza Simba Chiteshi Gedhi Valve inogadzirwa neKaibo Valve Boka Co, Ltd. Chinyorwa, bota kusanganisa mhando yemhando, imwechete lever wedge yakaoma solid single-disc, chigaro chekuisa chisimbiso pamusoro pezvinhu zvakasimbiswa carbide, zita rekumanikidza PN250 ~ PN320, vharafu muviri zvinhu ndeye kabhoni simbi tembiricha yakakwira uye yakakwira yakamanikidza simba chiteshi chegedhi vharafu.
Yakakwira tembiricha yekugedhi vharafu, inozivikanwawo sevheji yemagetsi chiteshi, inonyanyo shandiswa mumapaipi emasisitimu akasiyana emagetsi emagetsi ekugura kana kubatanidza yepayipi svikiro. Zvinoshanda svikiro: asiri-kungatikanganisa svikiro akadai mvura uye chiutsi. Inofananidzwa nezvimwe zvigadzirwa zvevharuvhu, magetsi emagetsi emagetsi anoonekwa nekupisa kwakanyanya uye kumanikidza kwakanyanya, uye yakasarudzika yekuzvisimbisa dhizaini. Iyo yepamusoro kumanikidza, iko kuvimbika kwakanyanya. Nekuda kwekuita uye hunyanzvi hunhu, yakasarudzika mamiriro ekushanda anoita kuti chigadzirwa chive chinhu chisingakwanise kutsiviwa nezvimwe zvigadzirwa.
1. Hapana kupokana pakuvhura nekuvhara. Iri basa rinogadzirisa zvakakwana dambudziko rekuti vharuvhu yechinyakare inokanganisa iyo yekuisa chisimbiso pamusoro nekuda kwekukonana pakati pekuiswa chisimbiso.
2. Chimiro chepamusoro-soro. Iyo vharuvhu yakaiswa paipi inogona kuongororwa zvakananga nekugadziriswa pamhepo, izvo zvinogona kudzikamisa kumisa kwechigadzirwa uye kudzikisa mutengo.
3. Chigaro chimwe chete chevhavhavhavha. Kubvisa dambudziko rekuti svikiro muvharo revhavha rinokanganiswa neasina kusimba kumanikidza uye rinokanganisa kuchengetedzwa kwekushandisa.
4. Yakadzika torque dhizaini. Iyo vheji yevhavha ine yakasarudzika dhizaini dhizaini inogona kuvhurwa zviri nyore uye yakavharwa neke chete mubato mudiki.
5. Wedge chisimbiso chimiro. Mavharuvhu aya anovharirwa nemagetsi anopihwa nevhavha yevhavha, achimanikidza wedge kurwisa chigaro chevhavha, kuitira kuti kuomarara kwevhavha kusakanganiswa nekuchinja kwepombi yekumanikidza musiyano, uye iko kusimbisa kuita kunovimbiswa pasi pemamiriro akasiyana ekushanda.
6. Kuzvichenesa-wega chimiro chekuvhara chisimbiso. Kana gedhi ratenderedzwa kubva pachigaro chevharuvhu, inoyerera iri mupombi inodarika nemadhigirii makumi matatu nematanhatu zvakaenzana padivi pechisimbiso chegedhi, izvo zvinongobvisa kukukurwa kwenzvimbo yechigaro chevhavha neiyo yekumhanyisa-mvura, asi zvakare inomhanya kure kuunganidza pane yekuisa chisimbiso pamusoro kuzadzisa chinangwa chekuzvichenesa.
Dhizaini uye Gadzira Kutarisana Flange divi Pressure Tembiricha Lating chipembenene Uye Bvunzo
Fomu yezvikamu zvikuru zvezvinhu uye Dzvinyiriro Bvunzo
Chivharo chemuviri Disc Dzinde Kuisa Simbiso Chiso Kuisa chisimbiso Shim Kurongedza Kushanda Tembiricha Inokodzera Medium
Zvinhu zvenaironi Enhanced Zvichienderana Graphite
1Cr13 / Zvichienderana Graphite
Enhanced Zvichienderana Graphite
WDC / 260
PTFE 25425 Mvura
ZGCr5Mo 200 Nitric asidhi
Zita Kudzvinyirira 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
Shell Bvunzo 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 24.0
Mvura Seal Bvunzo 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
Backseat Bvunzo 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
Mhepo Seal Bvunzo 0.4-0.7
Pashure: Magetsi Gedhi Valve
Zvadaro: API Bevel Gear Globe Valve